I-logo ephendulayo: yintoni na kwaye ungayenza njani enye | Abadali be-Intanethi
I-logo ephendulayo: yintoni na kwaye ungayenza njani enye
Kanye njengokuba amaphepha ewebhu ekwazi ukulungelelanisa ngokuxhomekeke kwifomathi aboniswa ngayo, izinto zangaphakathi eziwakhayo kufuneka zenze njalo. Iilogo yinxalenye yegraphic echonga inkampani kunye nendlela abathengi abakhokelwa ngayo xa kuthengwa. Ezi nazo kufuneka ziguquke kwaye zitshintshe ngokuxhomekeke kwimeko.
Abasebenzisi kufuneka bakwazi ukubona into efanayo kunye nexabiso lebrand, nokuba bakhangela kwikhompyuter, kwifowuni ephathwayo okanye babona intengiso eprintiweyo. Kule post ndiyacacisa yintoni ilogo ephendulayo, unokwenza njani eyakho kwaye nazi ezinye iimbono zelogos ezidumileyo ezikwazile ukuziqhelanisa neefomathi ezahlukeneyo.
1 Yintoni ilogo ephendulayo?
1.1 Iimpawu zelogo ephendulayo
2 Uyenza njani ilogo ephendulayo?
3 imibono yelogo ephendulayo
3.3 Ibhalansi entsha
4 Isiphelo: kutheni une logo ephendulayo?
Yintoni ilogo ephendulayo?
I-logo ephendulayo okanye eyaziwa ngokuba yi-logo eguqukayo, yi logo ekwaziyo ukuziqhelanisa nobukhulu besikrini, ngoko iyahluka ngobungakanani, ifomathi kunye nendawo. Abalahleki ukuba semthethweni okanye isazisi sophawu ngokwalo.
Le logo ivumela uphawu ukuba luziqhelanise naphi na. Iinkampani kufuneka zijonge ukuba ilogo yazo iya kujongeka njani ngokuxhomekeke kwisixhobo esiphathwayo esisetyenziswa ngabathengi. Ngokufanayo, Ngokuqhelekileyo, xa i-logo iyilwe, ineenguqulelo ezininzi kunye nobukhulu ngokuxhomekeke kwifomathi ye-intanethi ekugxilwe kuyo.
Kukho iwebhusayithi ebizwa ngokuba IiLogos eziphendulayo, apho unokubona iilogo ezaziwayo eziziqhelanisayo ngokuxhomekeke kwindawo ezikuyo. Iwebhusayithi ngokwayo ikuxelela ukuba wenze ubungakanani befestile yebrawuza yakho ukuze ubone ukuba ezo logo zingena njani.
Iimpawu zelogo ephendulayo
Njengoko benditshilo ngaphambili, Uphawu oluphambili lwelogo ephendulayo kukuba iqhelanisa kubo bonke ubungakanani obunokwenzeka, iifomathi kunye nezithuba. Kusenokubakho iinguqulelo ezininzi zale logo, iya kuxhomekeka kwakhona kwifomati ethe tye okanye ethe nkqo. Basenokuba nje uphawu lwebhrendi, igama lophawu, umanyano lwezi zimbini okanye ilogo epheleleyo, oko kukuthi, igama lebhrendi kunye nophawu kunye nomgca wethegi.
Ezinye iimpawu ezibalulekileyo bubuntu kunye nokulula. Injongo yelogo ephendulayo kukunciphisa ingqikelelo yayo iye kweyona ntetho incinci inokwenzeka ngaphandle kokuphulukana nobuni bayo. Into ebalulekileyo kukuba umbukeli uyakwazi ukuqaphela uphawu ngaphandle kwewebhusayithi abakuyo. Nokuba nge icon nje okanye nge logo iyonke.
Uyenza njani ilogo ephendulayo?
Ukwenza ilogo ephendulayo kuya kufuneka uthathele ingqalelo ilogo yoqobo yophawu. Iinguqulelo ezilandelayo ziya kuxhomekeka koku. Ngaphambili, ndikhankanye iinguqulelo ezinokuthi zibe nazo. Ungayenza yonke le nkqubo kwi Adobe Illustrator, njengoko isesona sixhobo sokudala uphawu kwihlabathi loyilo. Nangona unokuhlala ucela uncedo kwingcali yoyilo lwegraphic.
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo le miba ilandelayo ukwenza ilogo ephendulayo:
Ukunciphisa ubukhulu: kuya kufuneka wenze iimvavanyo zobungakanani, njengoko kuya kubakho ubungakanani obuncinci apho ungenako ukunciphisa uphawu ngakumbi, kuba aluyi kufundeka.
format: ilogo eyenziwe kuguqulelo oluthe tye ayifani nome nkqo. Ilogo ephendulayo kufuneka ihambelane neenqobo zokugweba onazo kwincwadana yemigaqo yeshishini.
Inqanaba: i-logo ayibonakali ngendlela efanayo kwikhompyutheni yekhompyutheni njengefowuni yefowuni, ekugqibeleni, njengoko isikrini sincinci, kuya kufuneka ulungelelanise kwintetho encinci enokufundwa. Kwikhompyuter, ilogo yakho ephendulayo iya kuba nazo zonke izinto eziyenzayo.
IBlancos: Kucetyiswa ukuba usebenzise indawo emhlophe efanayo kuzo zonke iinguqulelo zelogo ephendulayo, ukwenzela ukuba utshintsho lungabonakali ngokukhawuleza. Ukuba sele udale ilogo, unokuthatha, umzekelo, umlinganiselo omhlophe onawo phakathi kwe icon kunye negama.
Iintetho: ungenza iiyantlukwano ngazo zonke izinto ezenza uphawu: igama, i-icon, i-tagline.
umbala: Ukuba uphawu lwakho lwenziwe ngemibala emininzi, kunokuba lunomdla ukuba, kuxhomekeke kwiinguqulelo, usebenzise umbala omnye okanye omnye. Kodwa lo mbala unceda ukuchonga uphawu, ngaphandle koko, sebenzisa umbala ofanayo kuzo zonke iinguqulelo. Kuya kufuneka kwakhona uthathele ingqalelo imowudi yasebusuku, kwaye uncede ukuba ingachaphazeli umbono. Kunconywa ukuba le meko ibonakale ingalunganga okanye kumbala owodwa.
imibono yelogo ephendulayo
Inkampani yaseFransi eyenza iimpahla, iiwotshi, iziqholo kunye nezinye izinto ezininzi zodidi iye yakwazi ukulungelelanisa uphawu lwayo kwintetho encinci enokwenzeka. Ukuqala ngelogo epheleleyo kwinguqulelo ethe tye, ilungelelanisa kuguqulelo oluthe nkqo kuphela ngokuhambisa ingwenya edumileyo. Okokugqibela, susa igama lophawu kwaye ushiye ingwenya kuphela, kuba bayazi ukuba ubukho kuphela bophawu lwengwenya oludumileyo luyakwazi ukuqatshelwa naphi na, ngaphandle kwemfuneko yokubeka igama ecaleni kwayo.
Uhlobo oludumileyo lweejini, khetha ukususa umgca wethegi kwaye wongeze uphawu lwentengiso kuguqulelo lokuqala oluncitshisiweyo. Ngelixa okwesibini ukhetha ukususa zonke izinto ezinokwenzeka, eshiya kuphela igama lophawu ecaleni kwesimboli esibomvu esihlala sihamba nayo.
Ngokumalunga neenguqulelo zelogo ephendulayo yeBalance, sinokubona kwinguqulelo yokuqala ukuba njani imigca edumileyo enqumla u-"N" iyancipha ngenani kodwa yonyuka ngobukhulu, oku kuthetha ukuba, ukuba yincinci, ingcamango efanayo iyaveliswa. Kwinguqulelo elula yelogo, kuphela iileta ezidumileyo "N" kunye "B" ziyabonakala.
Isiphelo: kutheni une logo ephendulayo?
Ukuba ilogo yakho iyakwazi ukuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo idala umbono olungileyo kumbukeli. Itekhnoloji iqhubela phambili kwaye kunye nabo benza iinkxaso ezahlukeneyo zetekhnoloji, iimveliso kufuneka zazi indlela yokuziqhelanisa nazo, kwaye into yokuqala ebonwa ngumxhasi wexesha elizayo kubo yilogo yabo. Ukuba uphawu lwakho luyakwazi ukuziqhelanisa njengemizekelo endikunike yona ngasentla, ngokuqinisekileyo iya kunika umfanekiso oguqukayo kunye nowobuchule.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » I-logo ephendulayo: yintoni na kwaye ungayenza njani enye